Shirkii Golaha wasiiradda DF oo lagu heshiiyey inuu Garowe ka qabsoomo. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Shirkii Golaha wasiiradda DF oo lagu heshiiyey inuu Garowe ka qabsoomo.
Shirkii Golaha wasiiradda DF oo lagu heshiiyey inuu Garowe ka qabsoomo.
August 2, 2018 - By: Mohamed Dahir
Garowe (hm):- kulamo iyo xiriiro u dhacay si gaar gaar ah iyo kuwo guud kadib waxaa ay isku raceen madaxda dowladda Faderalka & Puntland in uu qabsoomo shirkii xukuumadda Faderalka Soomaaliya,iyadoo wixii khilaaf ahna wada xajood iyo shirar kale loo balamay.
Shirka golaha xukuumadda dowladda faderalka Soomaaliya oo uugudoominayo PM Xasan Cali Kheyre ayaa saacadaha soo socda ka bilabandoona hoolka shirarka ee wasaaradda Maaliyadda Puntland ee Garoowe.
Inta aanu shirku bilaban waxaa kulan wada qadandoona xubnaha Puntland u matalaya golayasha Faderalka ee kusugn garowe & Xukuumadda Puntland,kulanka kadibna waxaa si rasmi ah u furmayaa Shirka oo ay qayb ka yihiin wasiirada dowladda Puntland.
Magaaladda Garoowe waxaa kusugan golaha xukuumadda PM Xasan Cali Kheyre oo kaqaybgalaya shirkii fidinta nidaamka faderalka ee hore loogu soo qabtay magaalo madaxyadda Maamul goboleedyo ay kamid tahay Jubbaland.
waxaan si rasmi ah loo shaacin ajandaha saxda ah ee uu yeelanayo shirweynahaani,waxaase uu qayb ka yahay hanaanka faderalimka Soomaaliya ee ay hormuudka u tahay xukuumadda PM Xasan Cali Kheyre.